Ebe 10 na Spain iji gbanahu oyi | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Spain obodo, España, General
Anyị nọ n'ime zuru oke ikuku, na eziokwu bụ na anyị niile chọrọ ịlaghachi n'oge ọkọchị, na-ekpo ọkụ na ụbọchị ụsọ mmiri. N'ebe ugwu, etiti na ugwu bụ ebe oyi kachasị na-eme, ma n'ezie ọtụtụ ndị na-eche ugbu a ịme ohere iji pụọ ebe ị ga-aga ebe dịtụ ọkụ karị. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji nye gị ụfọdụ echiche.
Enwere ọtụtụ ebe na-enye anyị nnkwu ọkụ na-enweghị ịhapụ Spain. Ma ọ bụ na anyị nwere ebe mara mma iji gaa na oghere nke ihu igwe na-eso obere oge na ụbọchị ndị a, iji nwee ike ịgbanahụ oge oyi. Rịba ama ebe iri ndị a dị ezigbo nso, iji nwee ike ịnụ ụtọ ikuku ọkụ ma chee echiche banyere oge ọkọchị.
Cádiz bụ obodo mara mma nke ga-efunahụ ya. Ọ nwere ndị na - enyere anyị aka inwe ahụ iru ala, yana mpaghara ochie ebe ị nwere ike ịchọpụta obere ụlọ ahịa na ebe etiti etiti ebe ị ga - a aụ mmanya na mbara ala na anwụ. Ọ bụ ezie na o doro anya na ihu igwe adịghị ka oge okpomọkụ ma anyị nwere ike ọ gaghị asa ahụ na mmiri nke ndị a ma ama Caleta osimiriEe, anyị nwere ike ịhụ gburugburu ebe a. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị egwuregwu egwuregwu mmiri dịka kitesurfing, anyị nọ n'ọnọdụ dị mma.
Ọ bụrụ na anyị pụọ na peninshula anyị nwere ike ịga Ceuta, ebe ebe ọdịbendị ndị ọzọ na-agwakọta nke nwere ọtụtụ ihe inye anyị. Lee mgbidi eze, nke na-ebu anyị oge gara aga, ma ọ bụ na-agagharị na ogige Mediterranean. E nwekwara obere agwaetiti ndị dị nso, dị ka Perejil ma ọ bụ Santa Katalina. Anyị nwekwara ike ịga njem na Ugwu Hacho, anyị ga-adịkwa nso na Morocco, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịme njem ọzọ.
Melilla bụ obodo ọzọ dị na mpaghara Africa nke Spain, yana nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ oge ọhụụ maka oge a n'afọ. Anyị nwere ike na-eje ije site na Hernandez Park, ma otu n'ime ya kasị ukwuu na-adọrọ mmasị bụ ịhụ Centurylọ elu nke XNUMX nke narị afọ. Ọ ka nwere atọ n'ime anọ mbụ mgbidi mgbidi. Ebe ndị ọzọ ị ga-ahụ bụ Plaza de España ma ọ bụ Museum Museum.
Na Alicante n'oge a ọ ka dị oyi, ọ bụ eziokwu, mana ọ bụghị oyi dị ka ụfọdụ obodo dị n'etiti ma ọ bụ ebe ugwu, yabụ ọ nwere ike bụrụ ezigbo echiche maka ezumike izu ụka. Anyị nwere ike gbagoro ochie Lọ nke Santa Barbara, nke enwere echiche dị egwu, ma hụ agwaetiti Tabarca, ebe a ga-ahụrịrị dịka ọ bụ ogige okike.
Ibiza bu uzo ozo di nma nke anyi n’ahu n’oge oyi. N'agwaetiti a enweghi ikuku dị ka oge ọkọchị, mana ọ bụ ụzọ dị jụụ iji hụ ya. Anyị agaghị agaru n'akụkụ osimiri mana anyị nwere ike iji nwayọ gafere Dalt-Vila na ọnụahịa ga-ejide n'aka na ọ ga-ada ọtụtụ na obere oge. Enwere ọtụtụ akụkụ dị jụụ, obodo na osimiri iji hụ na-enweghị ịga n'oge ọkọchị, mgbe ihe niile juru na ndị njem nleta.
Na Canary Islands anyị na-ahụ ụzọ ọzọ iji gbanahụ oge oyi. Na nke a, anyị nwere ike ịga n'akụkụ osimiri, n'ihi na okpomọkụ nwere ike ịbụ ogo 25 n'agwaetiti ndị a. Fuerteventura bụ otu n'ime ha, na-na nleta nleta ugwu Tindaya, ma ọ bụ osimiri a ma ama nke Cofete. Nwekwara ike ịga obodo nta, dị ka El Cotillo, ma ọ bụ La Ampuyeta.
Lanzarote bụ ebe ọzọ ana - agagharị n’oge ọkọchị, mana ọ na - enwe ihu igwe ogologo oge n’afọ niile. On a agwaetiti anyị nwere ike ịnụ ụtọ na aja aja osimiri, kamakwa-eleta dị ka Ogige ntụrụndụ Timanfaya, ma ọ bụ Cueva de los Verdes, ọwara nke Corona Volcano guzobere.
N'àgwàetiti Tenerife anyị nwekwara onyinye dị ukwuu kwa afọ na nnukwu ihu igwe. Ọ bụghị naanị na anyị ga-enwe ọdọ mmiri nkwari akụ, kamakwa n'ụsọ osimiri dị ka Playa de Los Cristianos ma ọ bụ La Tejita. Na Nleta Teide Ọ bụ ihe dị mkpa, na-arịgo n'ụgbọ ala USB ya iji nwee echiche dị egwu banyere agwaetiti ahụ. Anyị nwekwara ike ịga Loro Parque ma ọ bụ Siam Park, ogige ntụrụndụ na-atọ ụtọ.
Anyị na-aga ugbu a na ndịda nke peninshula, na ọ bụ na Malaga nwere ike ịbụ ezigbo ebe n'oge oyi oge. Ihu igwe ka dịkwa mma ịnụ ụtọ ya Costa del Sol, ma ọ bụrụ na e nweghị ụbọchị ụsọ mmiri, anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị ga-eme, dị ka ịhụ Alcazaba ma ọ bụ Thelọ ihe nkiri Rome.
Obodo ndịda ọzọ nke nwere ike ịnye anyị ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ. Na Seville, ọ bụghị naanị na anyị hụrụ ebe ochie mara ezigbo mma, mana enwere ọtụtụ ihe ncheta iji hụ, dị ka Giralda, Torre del Oro ma ọ bụ Ezigbo Alcazar.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ọnọdụ 10 na Spain iji gbanahụ oge oyi
Ndo ma ị chefuru ịkpọtụrụ Almería. Taa na elekere abụọ nke ehihie ọ bụ ogo 18
Zaghachi Maria del Mar
Susana, ekwesịrị m ịgwa gị na Gran Canaria bụ agwaetiti a ghọtara maka inwe ihu igwe kachasị mma n'ụwa n'ihi ikuku ifufe na-eme ka ọ nwee oge okpomọkụ mmiri na-atọ ụtọ kwa afọ ma kọwaa na Playa del Inglés adịghị na Tenerife kama na Gran Canaria.
Zaghachi Gloria Rodríguez
Playa del Inglés adịghị na Tenerife ma na Gran Canaria, ị ga-enyocha ebe ndị ahụ
Zaghachi na mkpagide
Echeghị m na ị maara na ezigbo COSTA DEL SOL B AL ALMERÍA ebe enwere ọtụtụ awa nke anwụ na afọ na ọnọdụ kachasị sie ike na afọ. Ọ na-echefu anyị mgbe niile. Kedu ihe ihere bụ amaghị oke.
Amaghị m ebe ị gụrụ akwụkwọ mana m na-enye gị 0 ị chefuola ALMERÍA ebe anyị nwere ọnọdụ okpomọkụ kachasị mma na mpaghara mmiri niile ọ bụ ezie na ọ na-ewute ọtụtụ ...
Afọ ga-agafe ma anyị ga-anọgide na-abụ agwaetiti ndị nwere obi ụtọ, mana echefuru echefu, ndị nwe obodo, osimiri England dị na Gran Canaria, ekwenyeghịkwa m na nkwupụta na ọ bụ osimiri kachasị mma na agwaetiti, agwaetiti ọ bụla nwere amara ya na oke osimiri ya di egwu. Detuo onwe gi tupu ede ihe. Daalụ.
Zaghachi Ana isabel guadalupe sanabria
Kedu ihe ị na-agwa m banyere osimiri Las Canteras?
Gran Canaria e nwere nanị otu na-enweghị atụ.
Anyị na-anụ ụtọ ọnọdụ magburu onwe ya.
Bịa, m kwadoro ya.
Ee, emehiela m nke emegoro. Ọ dị m nwute na m mejọrọ mmadụ ma ọ bụrụ na ọ dị otu ahụ mana ee, amaghị m isi Spain ọ bụla. Ka o sina dị Antonio, echere m na ọ dịghị mkpa ịkparị, n'ihi na anyị niile bụ mmadụ ma anyị nwere ike imehie ihe, nri?
Zaghachi Susana Garcia
Gaa na London na Edinburgh